သူငယ်ချင်း ရေမွန်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် – Cele Snap
သူငယ်ချင်း ရေမွန်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
June 24, 2021 By Ju Ry Celebrity
အဆိုတော် ရေမွန်တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းက အခုထိ ဘယ်သူမှ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲနော်။ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေ ထက်မှာလည်း သူ့ကို ချစ်တဲ့ အယောက်စီတိုင်း ဝမ်းနည်းကြောင်းတွေ အမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်လေးတွေ ရေးသားဖော်ပြနေကြတာ အခုထိပါပဲ ။ အရည်ချင်းရှိသူတွေ ကြွေလွင့်ကြတဲ့ အခါ နှမြောတသ ဖြစ်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ် ။
အနုပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်း ရေမွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေရင်း စိတ်မကောင်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ် ။ အခုလည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူရဲ့ စာမျက်နှာလေးထက်ကနေ သူငယ်ချင်း ရေမွန်ရှိစဉ်က ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်စဉ်လေးတွေနဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ရေးသားဖော်ပြလာပါတယ် ။ သူသီဆိုဖို့ ရေမွန်ဆီက ဝယ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတောင် မဆိုရသေးကြောင်းကို လည်းကြေကွဲစွာရင်ဖွင့်လာ ပါတယ် ။
” ခုချိန်ထိမယုံနိုင်သေးဘူး သူငယ်ချင်းရယ် … နင့်ဆီကဝယ်ထားတဲ့သီချင်း နှစ်ပုဒ်ကိုတောင်ငါမဆိုရသေးဘူးလေ… photo လေးတွေပြန်ရှာရင်းငါတို့သောင်းကျန်းခဲ့ကြတဲ့ အချိန်လေးတွေကိုတောင်ပြန်သွားချင်မိပါတယ် … နင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကို ဒီ မှာလာသိမ်းရင်း ငါ့ရဲ့စိတ်ထားအရမ်းကောင်းပြီးအရည်အချင်းရှိတဲ့သူငယ်ချင်းလေး ရောက်လေရာဘဝတိုင်းမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး နင့်ရဲ့ အနုပညာအရည်အသွေးတွေကို အပြည့်အဝ ချပြနိုင်တဲ့ သူဖြစ်ပါစေလို့ ငါဆုတောင်းပေးပါတယ် … နောက်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့ရင်လဲ ခုလိုနင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ပါတယ် … နင်မရှိတော့ပေမဲ့လဲ နင့်နာမည်နဲ့နင့်သီချင်းတွေကို ငါအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာပါ … ငါ့သူငယ်ချင်းလေးကစိတ်ထားကောင်းလို့ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်မယ်ဆိုတာ ငါယုံတယ် …ကောင်းကောင်းအနားယူပါတော့ …. ” ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ရာ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါ တယ် ။
အဆိုတျော ရမှေနျတဈယောကျ ကှယျလှနျသှားတဲ့ သတငျးက အခုထိ ဘယျသူမှ မယုံနိုငျလောကျအောငျပါပဲနျော။ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာတှေ ထကျမှာလညျး သူ့ကို ခဈြတဲ့ အယောကျစီတိုငျး ဝမျးနညျးကွောငျးတှေ အမှတျတရ ဖွဈရပျလေးတှေ ရေးသားဖျောပွနကွေတာ အခုထိပါပဲ ။ အရညျခငျြးရှိသူတှေ ကွှလှေငျ့ကွတဲ့ အခါ နှမွောတသ ဖွဈစရာ အလှနျကောငျးပါတယျ ။
အနုပညာရှငျတှအေားလုံးကလညျး ရမှေနျနဲ့ပတျသကျတဲ့အကွောငျးတှကေို ပွနျလညျမြှဝရေငျး စိတျမကောငျးကွောငျး ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ ။ အခုလညျး သငျဇာဝငျ့ကြျောက သူရဲ့ စာမကျြနှာလေးထကျကနေ သူငယျခငျြး ရမှေနျရှိစဉျက ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အမှတျတရ ဖွဈစဉျလေးတှနေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ရေးသားဖျောပွလာပါတယျ ။ သူသီဆိုဖို့ ရမှေနျဆီက ဝယျထားတဲ့ သီခငျြးလေးတောငျ မဆိုရသေးကွောငျးကို လညျးကွကှေဲစှာရငျဖှငျ့လာ ပါတယျ ။
” ခုခြိနျထိမယုံနိုငျသေးဘူး သူငယျခငျြးရယျ … နငျ့ဆီကဝယျထားတဲ့သီခငျြး နှဈပုဒျကိုတောငျငါမဆိုရသေးဘူးလေ… photo လေးတှပွေနျရှာရငျးငါတို့သောငျးကနျြးခဲ့ကွတဲ့ အခြိနျလေးတှကေိုတောငျပွနျသှားခငျြမိပါတယျ … နငျနဲ့ပတျသကျခဲ့တဲ့အမှတျတရလေးတှကေို ဒီ မှာလာသိမျးရငျး ငါ့ရဲ့စိတျထားအရမျးကောငျးပွီးအရညျအခငျြးရှိတဲ့သူငယျခငျြးလေး ရောကျလရောဘဝတိုငျးမှာ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုငျဆိုငျပွီး နငျ့ရဲ့ အနုပညာအရညျအသှေးတှကေို အပွညျ့အဝ ခပြွနိုငျတဲ့ သူဖွဈပါစလေို့ ငါဆုတောငျးပေးပါတယျ … နောကျဘဝဆိုတာရှိခဲ့ရငျလဲ ခုလိုနငျ့ရဲ့သူငယျခငျြးဖွဈခငျြပါတယျ … နငျမရှိတော့ပမေဲ့လဲ နငျ့နာမညျနဲ့နငျ့သီခငျြးတှကေို ငါအမွဲတမျးအမှတျရနမှောပါ … ငါ့သူငယျခငျြးလေးကစိတျထားကောငျးလို့ ကောငျးရာမှနျရာရောကျမယျဆိုတာ ငါယုံတယျ …ကောငျးကောငျးအနားယူပါတော့ …. ” ဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှပေဲဖွဈရာ ပရိသတျကွီးလညျး ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျ ပွနျလညျ ဝမြှေပေးလိုကျပါ တယျ ။
ဒီကနေ့ ဇွန်လ(၂၄)ရက်နေ့ အင်းစိန်ထောင်မှာ ရုံးထုတ်လိုက်တဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ရှေ့နေ
ဒီကနေ့မှာပဲ ရုတ်တရက်အရေးပေါ်ဆေးရုံးတင်လိုက်ရတဲ့ ရှုပ်ရှင်ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ကိုကျော်စိုး